Umcwaningimabhuku uvumbulule okushaqisayo eMkhanyakude - Bayede News
Kumele iKwaZulu-Natal ibhukule kwezamafilimu
Umbiko obulindwe ngabomvu uvumbulule umsanka othinta izikhulu nowe-IEC
UMBIKO kaMcwaningima-bhuku Omkhulu usuphinde wavumbulula enye inkohlakalo esabisayo ngokubhubhudlwa kwezigidi zemali yamathenda kuMasipala uMkhanyakude okuthinta izikhulu eziphezulu zawo kanye nesikhulu esiphethe isikhungo esengamela ukhetho.
Lokhu kulandela ngemuva kokuba uMbiko kaMcwaningimabhuku Omkhulu wangowezi-2013 kuya kowezi-2014 uthole ukuthi izikhulu, amakhansela okubalwa nemeya uMnu uJeffery Vilane nezihlobo zabo nezisebenzi zeminye iminyango kuhulumeni bazititilizela amathenda kuMasipala uMkhanyakude kungalandelwanga imigudu efanele yokukhishwa kwawo.
Ngokombiko kaMcwaningimabhuku Omkhulu uveza ukuthi le nkohlakalo isiholele ekutheni lo masipala ovele udonsa kanzima kwezezimali, ulahlekelwe imali ebalelwa ezigidini zamarandi ezingama-R556,24.
IBAYEDE, inawo amakhophi ombiko kaMcwaningimabhuku Omkhulu oqukethe lezi zinsolo zenkohlakalo eMkhanyakude okumanje usufakwe ngaphansi kwe-Administrator okungu-Adv uBamba Ndwandwe othunyelwe nguMnyango wakwaCogta ngenxa yokuthi lo masipala usucwile wavela ngesicoco ezikweletini.
Uyadida lo mbiko kamcwaningimabhuku ngesimo esimbi ngezimali zikaMasipala uMkhanyakude ngoba ngenyanga edlule izikhulu zawo okubalwa nomkhulumeli womnyango wakwaCogta babize isithangami sabezindaba emahhovisini akwaCogta eThekwini bezophikisa isitatimende esenziwa ngabaholi be-IFP lapho babehlaba umkhosi wokuthi kungenelele ngokushesha ubuholi besifundazwe ekutakuleni lo masipala abathi usuguqe ngamadolo ngoba ungasenamali yokuqhuba izidingo zomphakathi ngenxa yenkohlakalo edla lubi.
Ngokusho kwemeya uVilane nozakwabo okubalwa kubo neMenenja kaMasipala uMnu u-Elliot Mzimela kanye noMnu uLennox Mabaso bakuchitha njengamampunge konke okwakushiwo yi-IFP ngesimo sezimali zalo mkhandlu baphinde bagxeka ubuholi be-IFP ngokuthi budlala umdlalo oshibhile wezepolitiki ngokungcolisa igama likamasipala ngezinto ezingekho.
Baqhubeka bathi asikho nesidingo sokuba kungenelele ubuholi besifundazwe nokuthi lo masipala ufakwe ngaphansi kwe-Administrator ngoba konke kuhamba kahle nesimo sezimali sisahamba kahle.
“Kuyacaca ukuthi lezi zikhulu zomkhandlu uMkhanyakude zazibhixa ngodaka emehlweni izintatheli kanye nomphakathi ngoba zase zivele seziwuphethe umbiko kamcwaningimabhuku oveza isithombe esingesihle ngesimo sezimali zomkhandlu,’’ kusho umthombo ongaphakathi eMkhanyakude.
Ngokombiko kamcwaningimabhuku kuvela ukuthi ezinkampanini ezizixebulele umkhoma ngamathenda akulo masipala kungalandelwa migudu elawula ukukhishwa kwawo, kubalwa nezikhulu ezisebenza kweminye iminyango kahulumeni nezakwezinye izifundazwe.
Umbiko kamcwaningimabhuku wenze izincomo zokuba uMnu uVilane, ozakwabo kanye nalezi zikhulu zakweminye iminyango kahulumeni okubalwa namaphoyisa, ukuba babekwe amacala enkohlakalo nokukhwabanisa.
Ngokombiko kuvela ukuthi lezi zikhulu ngesikhathi zifaka izicelo zale misebenzi zafihla ukuthi zisebenzela iminyango kahulumeni. Lokho kungukwephula umthetho weSigaba 112 (1) iPFMA olawula omasipala kanye nomthetho wakwaSupply Chain Management weSigaba 44 ongakuvumeli lokho.
“Lokhu kunikezelwa kwemisebenzi kuke kwenziwa futhi onyakeni owedlule kwangababikho zinyathelo ezithathwayo ukunqanda ukuba kungenzeki ukwephulwa komthetho wakwa Supply Chain Management omayelana neSigaba 38 (1),’’ kufundeka umbiko kamcwaningimabhuku.
Ngokombiko, zibalelwa ema-35 izikhulu ezisebenzela iminyango kahulumeni okubalwa kuzo eziqhamuka eMinyangweni WezeMfundo, WezeMpilo, WezoLimo, Wezokuhlaliswa Kwabantu, WezokuHwebelelana, Wezenhlalakahle, WezeziMali kanye nesikhulu esiphezulu esikhungweni esengamela ukhetho i-Independent Electoral Commission (IEC) asebehlomule ngemali engu-R9787 253.82.
Lesi sikhulu sakwa-IEC nguNkk uNonhlanhla Nkosi ongumnikazi wenkampani iMhali Trading and Projects. Inkampani yakhe igixabezwe ngomsebenzi wezi-R185 315.00. UMnu uD.K. Shongwe ovela eMnyangweni WezeziMali e-Eastern Cape yena inkampani yakhe i-Camelsa Consulting Group ihlomule ngethenda ka-R2 298580.36.
Kulo mbiko kuphinde kuvele nokuthi lezi zikhulu zikamasipala ziphinde zakufihla ukuthi izihlobo nemindeni yazo inikezelwe ngamathenda eMkhanyakude.
Inkampani kaMnu uVilane, iHydro Tech Services and Fabrications CC nayo ihlomule ngethenda yezigidi zemali yokulungisa amapayipi amanzi avuzayo kanye namaboreholes.
Lo mbiko woMcwaningimabhuku Omkhulu uphinde waveza ukukhathazeka ngokuthi nasembikweni wangowezi-2011/2012 izincomo zawo zokuba kuthathelwe izinyathelo izikhulu ezithile zomkhandlu ezazithinteka enkohlakalweni zashaywa indiva. Kulowo mbiko kwakubalwa ukukhokhelwa kwezinkampani imali eyizigidi ezili-R146 zingakawenzi umsebenzi wokuthumela amapayipi amanzi nagcina engathunyelelwanga. Kulezo nkampani ezahlomula ngezigidi zemali kubalwa iSinosa Construction Company okuyinkampani kaMnu uSbu Ncube ongumyeni kaNkk Dube-Ncube okuthiwa yakhokhelwa izigidi ezingama-R69 ingawenzile umsebenzi.
Lokhu kwenzeka kusaphethe uMnu uSbu Gwacela owayeyimeneja yomkhandlu naye owagcina engathathelwanga zinyathelo. Kuphela wakhokhelwa izigidi zemali ukuba ashiye emkhandlwini.
Ukwembuleka izinqe kukaMnu uVilane ngokuthinteka kwakhe kulo mkhonyovu kungase kumfakele enkulu ingcindezi emaqenjini ezepolitiki aphikisayo njengoba engase acindezele ukuba naye amiswe emsebenzini njengoba kusanda kumiswa ezinye izikhulu zalo masipala.
Ezikhulwini ezisamisiwe kubalwa uMnu uSimon Dlamini oyi-CFO kanye noMnu uN.S.V. Mkhwanazi iNhloko yakwaTechnical Services ngezinsolo zokuthi bakhokhela enye yezinkampani iMagedleza Construction imali efinyelele esigidini kungafanele. Nokho le mali okuthiwa yakhokhelwa iMagedleza Construction ngephutha igcine ibuyiselwe emuva. Ngesikhathi kwenzeka lelo phutha lokukhokheleka kweMagedleza Construction, uMnu uMkhwanazi wayebambe njengemeneja yomkhandlu. UMnu uDlamini noMnu uMkhwananzi kusalindeleke ukuba bavele phambi kwekomiti eliqondisa izigwegwe.
Okhulumela i-Independent Electoral Commission (IEC) KwaZulu-Natal, uMnu uMawethu Mosery uthe odabeni lwezinsolo zenkohlakalo eMkhanyakude ethinta omunye wezisebenzi zabo, uNkk uNonhlanhla Nkosi akanalo ulwazi lokuthi wakudalula yini ukuthi unebhizinisi alenza nomasipala uMkhanyakude.
“Cha impela anginalo ulwazi kodwa umuntu uzoke aphenye ukuze siqiniseke ukuthi ngabe wakudalula ukuthi unomsebenzi awenza nomasipala. Yize lingekho icala ekuzenzeleni amabhizinisi eceleni kodwa umthetho umile ekutheni kumele udalule kumqashi wakho,’’ kusho uMnu uMosery.
UMnu uMosery uthe uNkk uNkosi uqashwe yi-IEC, njengeProject Co-ordinator eMtubatuba.
“Kuyicala elimbi uma umuntu engadaluli amabhizinisi awenza emaceleni,’’ kuphetha uMosery.
IBAYEDE izame kwaze kwashaya isikhathi sokushicilela uMnumzane Lennox Mabaso okhulumela uMnyango wakwaCogta engakaphawuli ngesimo sakamuva kuMasipala waseMkhanyakude.
Ekhuluma esithangamini sabezindaba ebesiseThekwini ngenyanga eyedlule, uMhlonishwa uVilane uveze ukuthi ngesikhathi i-ANC ithatha izintambo zokwengamela umasipala ngowezi-2011 bewuhlwitha ku-IFP, bafica itshe selome inhlama umkhandlu ungenamali.
“Udaba lokuba sezikweletini akusilo oluqale manje. Yinto nathi esayifica kusaphethe iNkatha. Kodwa iPortfollio Committee eholwa nguMhlonishwa uVilane isizamile ukusinciphisa isikweletu yaphinde yeza neqhinga lokuphathwa kahle kwezimali zomkhandlu. Empeleni izikweletu esibhekene nazo okwamanje yilezo ezidalwe yisomiso”, kuqhuba uMnu uVilane.
UMnu uVilane udalule ukuthi lezi zindleko zidalwa kakhulu ukuthi uMkhandlu uchitha ezinkulu izimali udonsa futhi uhlanza amanzi eza emphakathini.
“Ezinye izindleko ngezokuqashwa kwezithuthi zamanzi njengengxenye yokulethela umphakathi amanzi. Okunye wukulungiswa kwamapayipi asuke elinyazwe ngumphakathi ngoba ucabanga ukuthi ayithusi (copper). Ukuwalungisa kudla ezinkulu izimali kwazise yinto esisuke singayihlelele.’’
Lo mholi uphinde wagxeka i-IFP ngokushiswa kwahhovisi ngowezi-2011 nathe lokhu kwakuyizindlela zokuqeda ubufakazi ngenkohlakalo eqhubekayo. “Lesi sigameko senze uphenyo lwamaphoyisa nelomcwaningimabhuku lwaba ngolunzima. Namanje sisalinde umphumela wophenyo lwamaphoyisa.’’ Uqhubeke wasola i-IFP ngokungaphathi kahle lo mkhandlu eminyakeni eyedlule nathe lokhu okwenzeka manje kuwukuvuka kwendulo.
“Enye yezinselelo esibhekene nayo ngeyokuthi ubuholi be-IFP behluleka ukusebenzisa imali eyayabelwe umkhandlu ukwakha izingqalasizinda nokwakuyimali eyizigidi ezili-R180. Lokhu kwaholela ekutheni kubuyiselwe emuva izigidi ezingama-R34 kumgcinizimali. Izigidi ezili-R180 nazo zicishe zangena enkingeni yokuthi zibuyiselwe emuva,’’ kubeka uMnu uVilane.
Enaba ngodaba lwesamba semali eyizigidi ezili-R180, uthe umkhandlu waqhamuka nobuhlakani bokuthi le mali ingabuyiselwa emuva. Lobu buhlakani kwaba wukuthi isigungu somkhandlu okuhlanganisa nabamele abe-IFP sanquma ukuba kuqalwe ngokushesha uhlelo lokufakelwa kwamapayipi amanzi ngokusebenzisa.
Bayede News Aug 14, 2015